Hollywood Star Jane Powell uye iyo Golden Age yeFirimu izvozvi vakafa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mafirimu » Hollywood Star Jane Powell uye iyo Golden Age yeFirimu izvozvi vakafa
Entertainment • mafirimu • nhau • vanhu • USA Kuputsa Nhau
Hollywood Super Star Jane Powell akatanga makore mashanu sekuimba muimbi muredhiyo muPortland, Oregon, uye akapedza makore makumi mapfumbamwe nemaviri. Pachiratidziri, akakurumidza kudzidza kubva pamabasa evechidiki kusvika pamimhanzi yemhando yepamusoro yaive yezana ramakore rechi5 Hollywood brand.
Imwe yeredzi dzechokwadi muHollywood Jane Poweell afa nhasi, ane makore makumi mapfumbamwe nemaviri
Kuzvivaraidza kuri padyo sekubuda pamusuwo wako wepamberi, aive mazwi ake, uye chiitiko chitsva chinotanga kune uyu waanofarira kune vakawanda
Nzvimbo yake yezororo yaaifarira yaive Mexico, kwaakadhirowa Zororo kuMexico muna 1946
Hollywood Golden Age yaive nekurasikirwa kwekupedzisira nhasi naJane Powell achipfuura.
Senzvimbo yekutarisisa mumimhanzi yemamuvhi, aive akanaka mumafirimu akadai se'Zuva NaJudy 'uye' Royal Muchato. '
Tweet inoti: Hupenyu hwakaita sei. Ndinoyeuka ndichiona Ms. Powell ne @PinkMartiniBand panguva @HollywoodBowl w/@rufuswainwright@arishapiro uye l cast ye @sesamestreet#Rota Jane Powell
"Kutandarira kuri padhuze sekubuda kunze kwemukova wako wepamberi.", Mashoko akataurwa nenyeredzi iyi.
Mumwe mutsigiri anonyora kuti: “Nyeredzi yeimwe yemafirimu andinofarira. Ini zvakare ndakave nemufaro wekumuona achiratidzira iro basa live mune yezhizha theatre. Aive nezwi rinoshamisa. RIP. ”
Jane Powell akaberekwa musi waApril 1, 1929. Firimu rake rechipiri raive Nenjodzi Inofadza, yaakadana kuti "firimu rakaipisisa randati ndamboita." Munguva yake yechitatu firimu, zororo kuMexico 1946 akasangana neshamwari yake yeramangwana, Roddy McDowall. yake yekutanga Technicolor firimu.
Akazvarwa Suzanne Lorraine Burce muPortland, Oregon, Powell aitova muimbi akabudirira munharaunda - akange aenda kumusha kwake se "Oregon Victory Girl" kutengesa Hondo Yenyika II zvisungo zvehondo - paakatamira kuHollywood, achizosaina kondirakiti. mutambi neMetro-Goldwyn-Mayer.
Mufirimu wake wekutanga wakauya muna 1944 na Rwiyo rweMugwagwa Wakavhurika, maakaridza rwiyo rwekufungidzira - muimbi wechidiki anojoinha nyeredzi dzemazuva ano saEdgar Bergen (naCharlie McCarthy), mutungamiri weBig Band Sammy Kaye uye WC Fields. .
Powell akatarisa muma1945 Zvinofadza Njodzi, 1948's Zuva NaJudy uye, muna 1951, basa-kutsanangura basa rakatarisana neAstaire mu Royal Wedding, umo vaviri ava vakatamba mukoma-hanzvadzi mutambo wekutamba.
Mafirimu akati wandei emimhanzi akatevera, zvichitungamira kunzvimbo yaPowell saMilly Pontipee muma1954's Varoora Vanomwe vehama Vanomwe.
Powell akaridza manhamba emimhanzi akasarudzika sa "Goin 'Courtin'," "Paunenge Uri Murudo" uye "Rinoshamisa, Rinoshamisa Zuva."